फेरिएको परिस्थितिको सूचक ‘कान्छा महारानी’ – sunpani.com
फेरिएको परिस्थितिको सूचक ‘कान्छा महारानी’
सुनपानी । २७ भाद्र २०७७, शनिबार मा प्रकाशित
ठिक यतिनै बेला शिवा शाहको आँग्रजी कृति ‘द अदर क्विन’ लाई सगुना शाहले कान्छा महारानीको आवरणमा नेपालीमा अनुवाद गरेको आख्यानीकरण भने चाख लाग्दो पुस्तक छ ।
जंगबहादुरले बसाएको भनिने नेपालगञ्ज शहरको एक नेपालगञ्जीयाले यो पुस्तक पढेपछि सत्ता संघर्ष र सत्तामा आफुले खोजिने स्थान, मौका र त्यसकालागि खेलिने भूमिकाबारे सोच्न बल प्रदान गरेको पुस्तकका रुपमा ‘कान्छा महारानी’लाई लिन सकिन्छ । बुझाई आ–आफ्नै खालको पनि हुन सक्छ ।
पुस्तकमा भित्र प्रवेश गर्दै गर्दा भाइ देवीबहादुरको मृत्युवरणले वीर नरसिंह कुँवर अर्थात् जंगेलाई साँच्चिकै छिट्टै जंगबहादुर बनाएको बुझ्न सकिन्छ । जंगबहादुरका बहादुरी, कुटिलता, अदम्य साहस, धूर्तता, कूटनीतिक सुझबुझ र चातुर्यताका प्रसंग निकै चाख लाग्दो रहेको छ ।
भीमसेन थापालाई झ्यालखानामा राखेर उनकी श्रीमतीलाई नांगै शहर हिँडाएको घट्नाले उति बेलाका शासकको मनोविज्ञानलाई छरपस्ट पार्दछ । त्यो छरपस्टतालाई पनि अनुवादक सगुना शाहले कलात्मक रुपमा पुस्तकमा उतार्नु भएको छ ।
आफ्नो यौन चाहना पुरा गर्न रातीको समयमा दरबारबाट निस्किएर गगनसिंहको घर पुगेकी ‘कान्छा महारानी’को चरित्रमा प्रश्न उठ्दै जब दरबारमा त्यो कुराको हल्ला फैलिन्छ आफ्नै सुसारे बाटुलीको बलि दिन्छिन् र आँफु चोखी हुन्छिन् ‘कान्छा महारानी’ ! यसले महिलाहरू आँफु जोगिन र राजदरबारको साख जोगाउन कुन हदसम्म महिला माथि नै अन्याय गर्न सक्थे भन्ने समेत देखाइएको छ ।
पितृ सतात्मक त्यो परिवेशमा महिला सत्ताको राप र तापलाई पुस्तक कान्छा महारानीमा आख्यानका रुपमा चित्रण गरिएको छ । सत्तामा महारानीहरूको उपस्थितिलाई महाराज राजेन्द्रविक्रम शाह भन्दा माथि देखाइएको छ ।
बडामहारानी साम्राज्यलक्ष्मीको साम्राज्यमा महिलाको खुट्टामा लगाउने पाउजुमा पनि साम्राज्य झल्काउने लेखनी छ, अनुवादकको कलममा । अंग्रेजहरूको अनुमति नहुँदाका वाफजुद पनि जिद्दी स्वभावकी बडामहारानी साम्राज्यलक्ष्मीको काशी जाने इच्छा त्यसको एक ज्वलन्त उदाहरण पनि हो । उनको औलो लागेर बाध्यतावस काठमाडौँ फिर्ता भएसँगै मृत्युवरण भएको प्रसंग छ ।
पात्रहरूलाई घटनाक्रमसँग मिसाएर उनीहरूको उपस्थितिलाई आख्यानीकरण गर्दा लेखक शिवा शाहले जति खुलाउन खोज्नु भएको छ, त्यसमाथि अनुवादक सगुना शाहको लेखनी थप ओजनदार बनेको पुस्तक पढ्दा सहज महसुस गर्न सकिन्छ ।
पुस्तकमा राजनीतिलाई फोहोरी र थकाउने खेलका रुपमा पनि चित्रण गरिएको छ । त्यसरी सत्ताको राजनीतिमा उत्रिएका थुप्रै पात्रहरूलाई अख्यानीकरण गर्दा उचित भूमिका दिनु असामान्य कुरा हो ।
‘द अदर क्विन’मा शाहले बुनेका शब्द अंग्रेजी भाषामा रमाउनेहरूका लागि उत्तिकै खुराक थियो । यस पटक सगुना शाहले नेपालीमा अनुवाद गरेर त्यो अंग्रेजी ‘फ्लेवर’लाई पूर्णतया शाही भाषाको ख्याल गर्दै उल्था गर्नु चुनौतीपूर्ण नै हो । कतिपय प्रसंगमा जंगेले पढ्न नजान्ने कुराका विषयमा ‘कान्छा महारानी’ले चित्रण गरिएको विषय र कतिपय ठाउँमा जंगे स्वयंले पत्र पढेको भन्ने कुरामा भने विरोधाभास समेत रहेको पाइन्छ ।
पुस्तक ‘कान्छा महारानी’ वास्तवमा प्रेम, माया र सत्तादेखि टाढा रहनु परेकी ’कान्छा महारानी’ (राज्य लक्ष्मी) एउटा पाटो र सत्ता नजिक, प्रेममा आशक्त, यौन क्रीडामा रमाइरहेकी राजेन्द्र लक्ष्मीको दुई वटा चरित्रलाई मूल रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
जब समय फेरिन्छ, परिस्थितिहरु पनि फेरिन्छ भन्ने विषयलाई उजागर गर्न अनुवादक शाहले मेहनतका साथ शब्द खर्च गर्नु भएको छ । वास्तवमा परिस्थिति र समय फेरिएको सूचकका रुपमा पनि ‘कान्छा महारानी’ लाई प्रस्तुत गरिएको अनुभव हुन्छ, पुस्तक पढ्दा । त्यही फेरबदलकै बिचमा जंगबहादुरको उदय हुन्छ ।
एउटा प्रसंगमा आफ्नो यौन चाहना पुरा गर्न रातीको समयमा दरबारबाट निस्किएर गगनसिंहको घर पुगेकी ’कान्छा महारानी’को चरित्रमा प्रश्न उठ्दै जब दरबारमा त्यो कुराको हल्ला फैलिन्छ आफ्नै सुसारे बाटुलीको बलि दिन्छिन र आँफु चोखी हुन्छिन् ’कान्छा महारानी’ ! यसले महिलाहरू आँफु जोगिन र राजदरबारको साख जोगाउन कुन हदसम्म महिला माथि नै अन्याय गर्न सक्थे भन्ने समेत देखाइएको छ । प्रेम त बहाना थियो ’कान्छा महारानी’को ! वास्तवमा राजकाज र बडा महारानी साम्राज्य लक्ष्मीसँग बढी समय बिताउने महाराज राजेन्द्र वीरविक्रम शाहले उनको (कान्छी महारानीको) यौन प्यास मेटाउन सकेका हुँदैनन् । राजाकी यी दुई रानी दुई बहिनी हुन साम्राज्यलक्ष्मी र राज्य लक्ष्मी (राजेन्द्र लक्ष्मी) ।
’कान्छा महारानी’मा प्रस्तुत एक पात्र बाटुली वास्तवमा आफन्तैबाट बेचिएकी एउटी चेली हुन्छिन् । उ सुसारेका रुपमा दरबारमा काम गर्न पुग्छिन् । तर कान्छा महारानीले लगाएको आरोपबाट मुक्त भएकी बाटुली स्वतन्त्रपूर्वक जिउन पावस भन्ने कान्छा महारानीको चाहना पनि उत्तिकै प्रशंसनीय प्रसंग छ ।
एक प्रसंगमा बाटुली भन्छे हाम्रो शरीर सधैँ किनिन्छ, बेचिन्छ तर आत्मा सधैँ मुक्त हुन्छ भन्ने उसका कुराले आत्माको मुक्ति खोज्नेहरूलाई ठूलै झटारो हानेको देखिन्छ । यो प्रसंगले हामीलाई उति बेलाको सामाजिक मनोदशा बुझ्न पनि केही हदसम्म सहयोग नै पुग्छ ।
जंगे अर्थात् जंगबहादुरको साहस ऊ आँफुलाई राजा नै ठान्छ । पुस्तक पढ्दै जाँदा कुनै प्रसंगमा ‘कान्छा महारानी’कै सामुन्ने जेंले भनेको हुन्छ, ‘आफ्नो भावना र विचारको त म राजा हुँ, कान्छा महारानी !’ उसले यो आफ्नो कुरा जुन उत्साह र आत्म विश्वासका साथ ‘कान्छा महारानी’ सामु व्यक्त गर्छ त्यो कुरा सायदै कान्छा महारानीले बुझिन होला कालान्तरमा ।
‘कान्छा महारानी’ले ढुंगेधारामा नुहाउँदा लिंग छेदन गरिएका सिपाहीहरूले धारामा पहरा दिएको प्रसंगले साँच्चिकै उति बेलाका शासकहरू कति क्रुर थिए आफ्नो स्वार्थका लागी भनेर चित्रण गर्दछ । आफ्नो यौन चाहना जसरी पनि पुरा गर्ने शासकहरू पुरुषका लिंग छेदन गरेर सुरक्षा खोज्दथे !
सत्ता बदल्ने कुरा हुक्काको कोइला बदले जस्तो हुँदैन भनेर गरिएको चेतावनी पूर्ण वार्तालापले शासकहरूको चेतनाको स्तरलाई प्रतिविम्ब गर्छ पुस्तक ’कान्छा महारानी’मा ।
पुस्तकमा पटक पटक दोहोरिएको कुरा दरबारमा भित्ताका पनि कान हुन्छन् भन्ने विषय छ । यसले राजदरबारमा बस्नेहरू पनि सुरक्षित छौँ भन्ने महसुस नभएको देखाउँछ । वास्तवमा शासन सत्ताका दरबारहरूमा जनताका लागी भने कहिल्यै कान नभएको महसुस गर्छु म, पुस्तक ‘कान्छा महारानी’ पढ्दै गर्दा ।
महाकाली नदीले धार वदलेको विषयमा उति बेलाका शासकहरू पनि गम्भीर हुने गर्थे भन्ने कुरा पुस्तकमा उठाइएको छ । अंग्रेजहरूले यहाँको शासन सत्तामा चासो लिने र भूमिका समेत खेल्ने कुरा पुस्तकमा बेला बेला उठाइएको छ । चाहे त्यो मुख्तियारी फेरबदलमा होस् वा युवराजाधिराजको गतिविधिमा होस् वा बडा महारानीको काममा नै किन नहोस् । अंग्रेजको चासो झल्किन्छ । जंगे अर्थात् जंगबहादुरले त्यही पृष्ठभूमिबाट अंग्रेजहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गरेको सहज अनुमान लगाउन पुस्तकले सहयता गर्छ ।
थापा खलक र पाण्डे खलको भूमिकाका बारेमा पनि ‘कान्छा महारानी’ पुस्तकमा बुझ्नेगरी भूमिका र योगदान अनि वफादारीता र गद्दारीका विषयमा घटनाक्रमलाई जोडेर चर्चा गरिएको छ ।
युवराजाधिराज सुरेन्द्र विक्रम शाहका विषयमा उल्लेख गरिएका प्रसंग र जंगबहादुरको सम्बन्धका बारेमा पनि पुस्तकमा चर्चा छ । हरपल अफिमको नशामा झुमिने युवराज सुरेन्द्र बहादुरका शौक र जंगबहादुरको साहस सुन्दा दन्त्य कथा जस्तो पनि लाग्छ । कतै उल्लेख गरिएको प्रसंग छ ः ‘महाराजाधिराजको सबैभन्दा ठुला शत्रु युवराजाधिराज नै हुन्छन् भनेर !’ राजतन्त्र अन्त्य भएको नेपालमा पछिल्लो दरबार हत्या काण्डमा पनि यो नियम लागु भएको हो कि ! यो नियम भनेर पाठकलाई घोत्लिन बाध्य पार्छ यो प्रसंगले ।
जंगबहादुरले आफ्नै मामा माथवर सिंह थापालाई पहिले निर्वासनबाट फर्काउन कान्छा महारानी मार्फत चाल चल्छन् । पछि उनै मामा आफ्नो सत्ता यात्रामा असहयोगी हुँदै गएको हुँदा हत्या गराएको कुरा पनि पुस्तकमा उतारिएको छ ।
पुस्तकको उत्तरार्धमा कान्छा महारानीका नजिक रहेका गगनसिंहको हत्याको प्रसंग छ । उता फत्तेजंग शाह सहितका दर्जनौँको पनि हत्या हुन्छ । त्यही घट्नालाई नेपालको इतिहासमा कोत पर्व भनिन्छ क्यारे !
पुस्तकको अन्त्यतिर रक्तपात शीर्षकमा कान्छा महारानीले रक्तपातले आँफुलाई हुनसक्ने फाइदा वा घाटाको अनुमान लगाउन नसकेको मनस्थितिमा चित्रण गरिएको छ । ‘कान्छा महारानी’लाई समय रोकिएको महसुस हुन्छ । कोतबाट बगेको रगत र जंगबहादुरका सात भाइको उपस्थितिलाई ‘कान्छा महारानी’ले आफना दृश्यमा कैद गरिरहेकी हुन्छिन् । रक्तपातसँगै कान्छा महारानीको भूमिकालाई रोक्दै पुस्तक ’कान्छा महारानी’को अन्त्य हुन्छ ।
पुस्तक पढ्दै जाँदा कान्छा महारानीको बाँकी अंश पनि उल्लेख भएको भए अहिलेको पुस्तालाई इतिहास बुझ्दा आधा कचल्टो हुने थिएन की ? भन्ने भान पर्छ । खैर, यो एउटा कलात्मक प्रस्तुत न हो ।
कोतपर्वका नामले चर्चित उक्त नरसंहार पछि सत्तामा पुगेका जंगबहादुरले युवराजाधिराज सुरेन्द्रलाई गद्दीमा बसाएको घटना यसकै उपज थियो क्यारे ! पुस्तकमा यी विषयलाई भने उठाइएको छैन ।
एक दिन मात्तिएको हात्तीलाई काबुमा राखेर महाराजाधिराज राजेन्द्रविक्रमको मन जितेका जंगे कप्तान हुँदै शासक बनेको कुरालाई बेलिबिस्तारका साथ शाहद्वारा लेखिएको अंग्रेजी पुस्तक ‘द अदर क्विन’लाई कान्छा महारानी शीर्षकमा सगुना शाहले अनुवाद गर्नु भएको छ ।